အောင်ထွန်းဦး: ကျွန်တော်နှင့် ၂၀၁၂ ပေါက်ကရ အိပ်မက်
ကျွန်တော် ပြေးနေသည်။ ကျွန်တော့်နောက်က ဘာလိုက်လာလို့ လိုက်လာမှန်းမသိ..။ တစ်ခုခုတော့ လိုက်လာနေသည်။ ကျွန်တော် ကြောက်လည်း ကြောက်နေမိသည်..။ ရှိသမျှ အင်အားတို့ကို ထုတ်ကာ ထို လိုက်လာသော အရာ မမီအောင် ကျွန်တော်ပြေးနေမိသည်။ ရင်ဘတ်မှာ လှိုင်းများသကဲ့သို့ နိမ့်လိုက် မြင့်လိုက် ဖြစ်နေပြီး တစ်ကိုယ်လုံးမှာလည်း ရေလောင်း ထားသည့်အတိုင်း ချွေးများက စိုရွှဲလျက်ရှိသည်…။
ပြေးရင်းတန်းလန်းနဲ့မှ မခံရပ်နိုင်အောင် မောလာလို့ အရိပ်ကောင်းကောင်း သစ်ပင်ကြီး တစ်ပင်အောက်မှာ ခဏ ရပ်နားလိုက်သည်..။ သစ်ပင်ကြီးက အတော့်ကို ကြီးသည်..။ လူသုံးယောက် ဖက်စာလောက်ရှိမည်။ သစ်ပင်ရဲ့ တစ်ဖက်မှာ လူတစ်ယောက်တရားထိုင်နေတာကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ကျွန်တော် ကြည်ညိုစွာဖြင့် ထိုသူ၏ မျက်နှာကို သေချာကြည့်လိုက်မိသည်…။ ဘယ်သူများလဲလို့…. မကြာခင်ကမှ မြန်မာနိုင်ငံကို လာလည်ပြီး မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည့် အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမား ဖြစ်နေပါရော့လားးးးး…။
"ဟလို… ခင်ဗျားက အမေရိကန် သမ္မတကြီး…၊ အိုဗားဘား မှတ်လား…"
"မြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးမှ တရားတွေ ဘာတွေထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ သတင်းတွေထွက်နေတဲ့အတိုင်း သမ္မတကြီး က ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပြောင်းတော့မှာပေါ့.."
"ဘာတွေ လာပြောနေတာလဲ..၊ ဘယ်သူက တရားထိုင်နေလို့လဲ..၊ ငါ့ဘာသာငါ ဒီအပင်အောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ က ကလေးတွေနဲ့ ဂေါ်လီပြိုင်ရိုက်မလို့ ချိန်းထားတာ.. မင့်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက ကလေးတွေက ထုံးစံအတိုင်း နောက်ကျနေလို့ ငါစောင့်ရင်း ငိုက်နေတာဟေ့…"
"သြော်…၊ မြန်မာနိုင်ငံက ကလေးတွေကို သမ္မတကြီး မနိုင်နိုင်ပါဘူး.."
"သူတို့က အငြင်းသန်တယ်ဗျ…နိုင်ချင်ရင်တော့ ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ သွားဆုတောင်းချေ…"
အိုဘားမားလည်း မြန်မာကလေးတွေကို ဘယ်လောက်တောင် နိုင်ချင်နေရှာသည်မသိ..။ ငေါက်ခနဲထကာ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်သို့ ဆုတောင်းရန် ငေါက်ဆိုက် ငေါက်ဆိုက်နဲ့ ထွက်ခွာ သွားချေတော့သည်..။
ကျွန်တော်လည်း အမောပြေပြီး ခရီးဆက်မယ် ကြံကာရှိသေးတယ်.. သစ်ပင်နောက်မှ ကျယ်လောင်သော ရီမောသံ တစ်ခုထွက်လာသည်..။
ကျွန်တော် ဒီရယ်သံကို ရင်းနှီးစွာကြားဖူးသည်..။ သို့ပေမယ့် ဘယ်မှာ ကြားဖူးမှန်းမမှတ်မိ..။ ခဏကြာတော့ နောက်တစ်ခါ ရယ်သံကြားရပြီး သစ်ပင်နောက်မှ လူတစ်ယောက်ထွက်လာသည်..။
ဘယ်သူလဲ သေချာကြည့်လိုက်တော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဆိုကျော် Fokker ဖြစ်နေသည်..။ ကျွန်တော်လည်း မေးလိုက်သည်..။
"ကို Fokker ကြီး..၊ ဘာတွေကို ဒီလောက်တောင် သဘောကျနေတာတုန်း.."
"သောက် သတောင်းစား.၊ ငါ့ဟာငါ ဘာရီရီ မင်းနဲ့ ဘာဆိုင်တုန်း.."
"ဗျာ… မဆိုင်ပါဘူး…၊ သိချင်လို့ မေးးးးး"
"သောက်သတောင်းစားလို့ နောက်ထပ် အဆဲမခံချင်ရင် ငါ့ရှေ့က မြန်မြန်ထွက်သွားစမ်း…" ဆိုပြီး လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတဲ့ CD ချပ်တွေနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ပစ်ပေါက်တော့သည်..။ ကျွန်တော်လည်း နောက်ကျတဲ့ ခြေထောက် သစ္စာဖေါက်ပဲ ဆိုပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်..။ ကို Fokker ကြီးနှယ်…၊ ဒေါသကြီးလိုက်တာလဲ လွန်ရော….။
ပြေးတာနဲနဲ ကြာလာတော့ လူကမောလာပြန်သည်..။ ခဏကြာတော့ အရှေ့မှာ အင်္ကျီအဖြူ..၊ ကချင်ပုဆိုးဝတ်ထားပြီး အသားညိုညို အရပ်ပုပြတ်ပြတ် လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်..။ ကျွန်တော်အားတက်သွားသည်..။ အကူအညီ ရလိုရငြား သူ့ဆီကို ချဉ်းကပ်လိုက်သည်…။
"အေး… မင်းငါ့ဆီကို လာတာမှတ်လား.." သူ့ဆီကို လာမှန်း သိသိကြီးနဲ့ ဒီလိုကြီးပြောလာတော့ နည်းနည်းတော့ ကြောင်သွားမိသည်…။
" ဟုတ်ပါတယ် ခင်ဗျ…"
" အေး … ငါဆိုတဲ့ကောင်က အကုန်သိ..၊ အကုန်တတ်တယ်…၊ တစ်ချိန်ကြရင် သမ္မတ လုပ်မယ့်ကောင်… မင်းတို့ထဲမှာ..၊ သမ္မတကို တစ်ယောက်တည်း စိန်ခေါ်ရဲတဲ့သူ ရှိလား.."
" မရှိပါဘူး ခင်ဗျာ…"
"အေး..မှတ်ထား…ငါစိန်ခေါ်ထားတယ်…၊ ဟိုဘက်က လက်ခံ/မခံ အကြောင်းမပြန်သေးလို့…စကားမစပ် ပြောရအုံးမယ် .ငါက ဗိုလ်ချုပ်သေပြီး ၀င်စားတာလေ..."
"ငါနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့က မွေးနေ့က ရက်ကော.. လကော ..တူတယ် လေ…"
"အာ…၊ အဲဒါလေးနဲ့တော့ ဗိုလ်ချုပ်ဝင်စားတယ် ပြောလို့မရပါဘူး..၊ အဲ့လိုသာဆိုရင် ကမ္ဘာမှာ ဗိုလ်ချုပ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိ…"
"တိတ်စမ်း..၊ ငါဝင်စားတယ်ဆို ၀င်စားလိုက်.. ဟုတ်ပြီလား…"
"သြော်..ဟုတ်ပါပြီ…၊ဒါနဲ့ ဆရာကြီး နာမည်က.."
"ဟိုးးးးးဆရာ…၊ သိပြီ…၊ သိပြီ…၊ နာမည်ကြီးပဲ…၊ ခုတော့ ကျွန်တော့်ကို သွားခွင့်ပြုပါအုံး.."
"နေပါအုံး..၊ ဖုန်းနံပါတ်လေး ယူသွားလိုက်အုံး..၊ လိုတာရှိရင် ဖုန်းဆက်လိုက်…"
"နေ…နေပါစေ..ဆရာကြီးရယ်… မယူတော့ပါဘူး..၊ သွားစရာလေးရှိလို့ သွားလိုက်ပါအုံးမယ်…"
"အေး..သွားစေ..၊ မင်းသွားတော့မယ်ဆိုတာငါသိနေတယ်…. ငါက အကုန်သိအကုန်တတ်ပဲဟာကို..ငါရွေး ကောက်ပွဲဝင်ရင် မဲပေးဖို့ မမေ့နဲ့နော်…"
ဘာမှ ပြန်မပြောတော့ပဲ အမြန်ထွက်လာမိသည်..။ ဘယ့်နှယ့်ဗျာ… ဘယ်လိုလူတွေနဲ့ လာတွေ့လို့ တွေ့နေမှန်းမသိ..။ တစ်ယောက်မှ အဆင်မပြေ..။ တွေးတောနေတုန်း.. ပုခုံးတစ်ဖက်ကို လာပုတ်တာခံရသည်…။ လှည့်ကြည့်တော့ လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်..။ လက်ထဲမှာလည်း ဘာတွေကိုင်ထားမှန်းမသိပဲ သူ့ပုံစံက ဝေခွဲရခက်နေသည့်ပုံစံ… အဆိုပါလူက
"ဒီဟာတွေက မီးခိုးဗုံးလား..၊ မီးလောင်ဗုံးလား…" ဆိုပြီး သူ့လက်ထဲမှာကိုင်ထားတဲ့ ဗူးလေးတွေကို ထုတ်ပြသည်။
"အာ……၊ ဒါတွေ ကျွန်တော်မသိဘူး..၊ ကျွမ်းလည်း မကျွမ်းဘူးဗျ…"
"ထင်သားပဲ..၊ ဒါတွေက မီးလောင်ဗုံးဆိုတာကို.."
"မဟုတ်ဘူးလေ…၊ ကျွန်တော် မသိဘူးပြောတာလေ.."
"ဟုတ်တယ်ညီလေး.. ဒါက မီးလောင်ဗုံးတွေ.. ညီလေးထင်တာနဲ့ အစ်ကိုထင်တာ တစ်ထပ်တည်းပဲ.."
"ဒီမှာ.. ခင်ဗျားကို ကျွန်တော် မီးလောင်ဗုံးလား..၊ မီးခိုးဗုံးလား မခွဲတတ်ဘူးလို့ ပြောနေတာဗျ…"
"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီလေး….၊ ဒီလို မီးလောင်ဗုံးဆိုတာကို တိတိကျကျ ဖြေပေးတဲ့အတွက်.."
"ဟုတ်တယ်ဗျို့…….၊ အဲ့ဒါတွေက မီးလောင်ဗုံးတွေ…၊ကဲ… ကျေနပ်ပလား…"
"ဟေးးးးးးးးးးးးးးးး…..အဖြေရပြီဟေ့…၊ နက်ဖန် သတင်းစာထဲမှာထည့်မယ်..၊ ဒါတွေက မီးလောင်ဗုံးဆိုတာကို.." ဆိုပြီး ပျော်ရွှင်စွာ ပြန်လည် ခုန်ပေါက်ထွက်ခွာသွားလေတော့သည်…။
ဘာတွေ ဖြစ်နေမှန်းကို မသိ….။ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ဆက်လက် လမ်းလျှောက်လာနေမိတော့သည်..။ လမ်းတစ်လျှောက် ဘယ်သူတွေနဲ့ လာတွေ့လို့ တွေ့နေမှန်းကို မသိ…။ တွေးရင်းငေးရင်း လမ်းလျှောက်နေရင်းမှ နားထဲကို ဆူညံသံတွေ တိုးဝင် လာသည်..။ နောက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့… လေယဉ်တစ်စင်း ကိုယ့်နောက်ကို လိုက်နေသည်..။ မောလို့ နားရမယ်မှ မကြံရသေး လေယဉ်အတိုက်မခံရရန် မြေပြင်ပေါ်တွင် ကျွန်တော် ပြေးလွှားနေရသည်..။ ပြေးရင်းနဲ့ ကျွန်တော် နောက်ကိုလှည့်ကြည့်မိသည်..။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ထင်ရှားသော သူဌေးကြီးတစ်ဦးက လေယဉ်ခေါင်းပေါ်တွင်ထိုင်ပြီး လေယဉ်ကို မြင်းလှည်းမောင်းသလို ကြိုးနှစ်ချောင်းဖြင့် မောင်းနေတာကို တွေ့လိုက်ရသည်..။ ကျွန်တော်လည်း အလွန်မောပန်းနေပြီး ဆက်လက်မပြေးနိုင်တော့သည့် နောက်ဆုံး ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီး အပြေးရပ် နောက်လှည့်ကာ လက်နှစ်ဘက်ကို ရှေ့ဆန့်ထုတ်လိုက် ပြီး အသံကုန်ဟစ်အော်လိုက်သည်…။
အလွန်လျင်မြန်လှသော အရှိန်ဖြင့်မောင်းနှင်နေသော လေယဉ်ကြီးမှာ ကျွန်တော့်ရှေ့ တစ်ပေ အကွာခန့်တွင် တိခနဲ ထိုးရပ်သွားသည်..၊ လေယာဉ်ပေါ်မှ သူဌေးကြီးကပျာကယာဆင်းလာသည်…ပြီးတော့ ကပျာကယာဖြင့်
"ဘယ်မှာလဲ..အဘ..၊ ပြောစမ်းပါ ဘယ်မှာလဲ..အဘ…"
"ဘာတွေလာပြောနေတာလဲ..၊ ကျွန်တော့်ဟာကျွန်တော် လန့်ပြီး လျှောက်အော်မိတာကို…"
"သေနာလေး..၊ နောက်ခါအော်ရင် တစ်ခြားဟာအော်.. အဘမပါစေနဲ့ ကြားလား..၊ မဟုတ်ရင် လေယာဉ်နဲ့ လိုက်တိုက် လိုက်မယ်…"
"သြော်…ဟုတ်ကဲ့.." ဆိုပြီး လေယဉ်ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာကို ကြည့်နေမိသည်..။ သြော်.. အဘကျေးဇူး ကြောင့် လေယဉ်အတိုက်မခံရတာပါလား…။
ထိုစဉ် ကျွန်တော့်ဆီသို့ အပြေးလှမ်းလာနေသော လူတစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ရသည်..။ အဝေးကဆိုတော့ သူ့ရုပ်က မသဲကွဲ..၊ အနီးရောက်မှ သေချာကြည့်မိတော့… ၂၀၁၁ အကောင်းဆုံးအမျိုးသား ဇာတ်ဆောင်ဆုရှင် အကယ်ဒမီ နောင်နောင်ဖြစ်နေသည်..။ လက်ထဲမှာလည်း အကယ်ဒမီ ရုပ်ထုကို ကျစ်ကျစ် ဆုပ်ကိုင်လို့…။ ကျွန်တော့်ဆီကို ရောက်တာနဲ့…
"အစ်ကို…အစ်ကို… ကျွန်တော့်ကို သိလားဟင်.." သူ့မျက်လုံးမှာ မျှော်လင့်ချက်တွေ တောက်ပနေသည်..။ ကျွန်တော့်ဆီက အဖြေကို ရဖို့ အရမ်းမျှော်လင့်နေသည်..။
"သိတယ်မှတ်လား..အစ်ကို..၊ ကျွန်တော့်ကို သိတယ်လို့ ပြောလိုက်စမ်းပါ.." ကျွန်တော့်ဆီက လိုချင်သော အဖြေကို သူက စကားကြောင်းပေးနေသည်..။
"ထာဝရအလင်းတန်းများလေ…၊ ၂၀၁၁ အကယ်ဒမီလေ..၊ အကောင်းဆုံးအမျိုးသား ဇာတ်ဆောင် ဆုလေ…သိတယ် မှတ်လား " နာမည်မပြောရုံတမည် သူ့ကိုမှတ်မိစေနိုင်သော အကြောင်းအရာတို့ကို တောက်လျှောက် ပြောပြနေတော့သည်..။
ကျွန်တော်လည်း… "ကျွန်တော်ထင်တယ်.. ခင်ဗျားက နောင်နောင်..ဟုတ်….."
ကျွန်တော့်စကားမှ မဆုံးသေး ပျော်ရွှင်စွာ အော်ဟစ်လိုက်သော သူ့အသံကို ကြားလိုက်ရသည်..။ တစ်ဆက်တည်း..
"တွေ့လားး…၊ လူတွေပြောနေကြတာ..၊ ငါက အကယ်ဒမီသာရတာ..၊ ငါ့နာမည်ကို လူတွေက မကြားဘူး မသိကြဘူးတဲ့…၊ မမြင်ဘူးရင်လာကြည့်ကြ…၊ ဟောဒီမှာ နောင်နောင်ကို သိတဲ့..၊ နောင်နောင်ကိုချစ်တဲ့..၊ နောင်နောင်ရဲ့ ပရိတ်သတ်. အရှင်လတ်လတ်ကြီး..၊ မမြင်ဘူးရင် လာကြည့်လှည့်…"
သူပြောမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နောင်နောင်ပရိတ်သတ် ဖြစ်မှန်း သိရတော့သည်..။ ကိစ္စမရှိ..၊ အသားပဲ့ပါ သွားတာလိုက်လို့..။
ထိုစဉ်………. "သားကြီး…ထတော့…၈း၀၀ နာရီထိုးနေပြီ..၊ ရုံးသွားရမယ်မှတ်လား…" …. အမေ့ရဲ့ နှိုးစက်သံကို ကြားလိုက်ရသည်..။ မျက်နှာသစ် သွားတိုက်ရင်း ညက မက်ခဲ့သော အိပ်မက်ကို ပြန်လည် စဉ်းစားမိပြီး ပြုံးဖြစ်သည်..။ တစ်ခုတော့ စဉ်းစားစရာရလိုက်သည်..။
ရှေ့လျှောက်တော့ ငါ Facebook လျှော့သုံးဖို့ လိုနေပြီ…:-D
စာရေးသူ Aung Htun Oo ရေးခဲ့ချိန် 9:32 PM